February 2015 ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
Windows 8 နဲ့ Windows Server 2012 မှာ Net Framework 3.5 နဲ့ 4.0/5.0 အထက် Install မရခြင်းပြသနာကို အလွယ်တကူဖြေရှင်းနည်း
9:47:00 PM software, Tutorial No comments
Windows 8 နဲ့ Windows Server 2012 မှာ Net Framework 3.5 နဲ့ 4.0 Install မရခြင်းပြသနာကို ဖြေရှင်းနည်း
ဒီပိုစ့်လေးကို ကျနော် တင်ပေးနေချင်ခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီ
မတင်ပေးအားတာနဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေလည်း ပိုများလာပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် သင်ဟာ ကွန်ပျူ တာဆိုင်ရာကို စတင်လေ့လာခါစဆိုရင်တော့
အရင်ဦးဆုံး မသိမဖြစ်တဲ့ အပိုင်းတစ်ခုရှိကောင်းရှိနေမှာပါ
အဲဒါကတော့ အခက်ကြီးမဟုတ်ထင်ရပေမယ့် လေ့လာခါစဆိုတော့
အမြဲတစေလို အခက်ဖြစ်နေကြရတဲ့ ပြသနာလေးတစ်ခုပါ။
အဲဒါကတော့ Windows အသစ်တင်ပြီးတာနဲ့ Net Framework ပြသနာလေးပါ
တကယ့်အရေးပါတဲ့ ကွန်ပျူ တာဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲကြီးတစ်ခုပါ
ရိုးရိုးလေးတစ်ခု ပြောရရင်တော့ ကွန်ပျူ တာမှာ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်
(Shweyoe Dictionary v3.0)
လေးတစ်ခုအသုံးပြု ချင်တယ်ဆိုရင် အဓိကစကားပြောလာတာက
ဒီ Net Framework ဆော့ဝဲပါ။ ကွန်ပျူ တာမှာ သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့
သင့်တော်ရာ ဗားရှင်းကို အင်စတော လုပ်ထားပြီးသား ရှိမနေခဲ့ရင်တော့
အဘိဓာန်ကို အင်စတော လုပ်လို့ လုံးဝအဆင်မပြေပါ။
အခုကျနော် နားလည်သလောက် ရှင်းပြပေးသွားချင်တာကတော့
Window 8 တင်ထားပြီးသား ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာ Net frame 3.5 နှင့် 4.0 ကို
Net framework ကို အလွယယ်တကူ ဘယ်လို အင်စတော
တကယ်တော့ Windows Version အလိုက် Net Framework တွေဟာ တစ်ပါတည်း
Build in ပါလာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ Operating နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Net Framework တွေကို
Microsoft က တစ်ပါတည်းထည့်ပေးလိုက်ပေမယ့် အသုံးပြုရတဲ့ Software တစ်ချို့ကတော့
Net Framework ကို ဗားရှင်းအမြင့်မှ လက်ခံတတ်ပါတယ်။
အခုကျနော်တို့ အများစု အသုံးပြု နေကြတဲ့ Windows 8 နဲ့ Windows Server 2012 တို့မှာ
Net Framework 3.5 ရော 4.0 ပါ အဆင်သင့်ပါလာပြီးသားပါ။ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့
Windows က Pirate Windows ဖြစ်တဲ့အတွက် Setting တစ်ချို့မှားနေတာလေးပါ။
Windows 8 နဲ့ Windows Server 2012 တို့မှာ Setting မှားနေတာကိုမပြင်မိ
သတိမထားရင်တော့ Net Frame Framework ထပ်ထည့်ခဲ့ရင်
အောက်ကပုံမှာလို Error တက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ Error ကို Setting ထဲမှာ ပြင်ကြည့်ရအောင်
Winodws 8 အတွက်
1. ကီးဘုတ်ပေါ်ကနေ Windows Key နဲ့ X Key ကို တွဲနှိပ်လိုက်ပါ..
2. ပြီးရင် Programs and Feature ကိုရွေးလိုက်ပါ..
3. နောက်ထပ် Turn Windows Features on or off ဆိုတာကို
1. ကီးဘုတ်ပေါ်ကနေ Windows Key နဲ့ R ကိုတွဲနှိပ်ပြီး Run Box ကိုခေါ်လိုက်ပါ..
2. Run Box ထဲမှာ OptionalFeatures.exe လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် Turn Windows Features on or off ဆိုတဲ့ဘောက်တစ်ခု ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. အဲဒီဘောက်ထဲမှာ .Net Framework ဆိုတဲ့ Folder တွေကိုလိုက်ရှာပါ။
.Net Framework 3.5, 4.0, 4.5 ဘာပဲရှိရှိ ... ရှိတဲ့ .Net Framework ဆိုတဲ့
Folder တွေရဲ့ဘေးမှာ အမှန်ခြစ်တွေခြစ်ပေးလိုက်ပါ။
(တကယ်လို့များ မိမိကွန်ပျူ တာမှာ Net Framework တွေအသင့်မရှိခဲ့ရင်
Install လုပ်ဖို့ အောက်မှာလင့်မှာ ရယူလိုက်ပါ... အဲဒီ Net Framework
တွေမရှိရင်တော့ ပထမအစမှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ Error တက်မှာမဟုတ်ပါဘူး...)
4. Net Framework Folder တွေရဲ့ ဘေးမှာ အမှန်ခြစ်ပြီးရင်တော့ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး ကွန်ပျူတာကို Restart ချပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် မိမိကွန်ပျူတာထဲက Net Framework တွေ ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ပါပြီ...။ တကယ်လို့ အချို့သော ဆော့ဝဲတွေကြောင့် ဗားရှင်းနိမ့်လို့ အမြင်ကို ထည့်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း စိတ်ကြိုက်အင်စတော လုပ်ယူလို့ ရနေပါပြီ။
(ဒီနေရာမှာ အထူးသတိထားရမှာကတော့ Net Framework ချင်းတူတာတော့ထည့်လို့မရပါ)
2. Run Box ထဲမှာ ServerManager လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် Add Roles and Features Wizard ဆိုတဲ့ဘောက်တစ်ခု ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိကွန်ပျူတာရဲ့ Operating နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် Net Framework များကို
အောက်ကလင့်များမှာ ဒေါင်းလော့ ရယူလိုက်ပါ။
Net Framework 4.0 Download Here
Net Framework 4.5 Download Here
တစ်ခြားသော Net Framework Version တွေကိုတော့
Official ရဲ့ဆိုက်မှာ စိတ်ကြို က်ရှာဖွေဒေါင်းလော့ရယူနိုင်ပါတယ်။
နောက်နေ့ ကျနော် Net Framework Version တွေကို ကွန်ပျူ တာမှာ
Online & Offline တို့ဖြင့် အင်စတောလုပ်နည်းတွေကို ပုံလေးတွေနဲတကွ
8:22:00 AM movies, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်, အန္ဒိယရုပ်ရှင်2comments
အိန္ဒိယ Drama ကားကောင်းကောင်းလေးတွေ တင်ပေးပါဆိုလို့
Kai po che! (2013) ကို မြန်မာစာတန်းထိုး နဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီကားက IMDb မှာ Ratings: 7.7 အထိရထားသလို
မင်းသားကလည်း PK မှာ Aamir Khan နဲ့
တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Sushant Singh Rajput ရဲ့ကားလေးပါ..
အိန္ဒိယရုပ်ရှင် တောင်းဆိုကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့
8:03:00 AM 2014, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်, အန္ဒိယရုပ်ရှင် No comments
မကြည့်လိုက်ရ မရှိအောင် ကြည့် ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်..
7:47:00 AM movies, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
IMDb မှာ Ratings: 7.3 အထိရထားတဲ့ Adventure | Drama အမျိုးအစား ဇာတ်ကားလေးပါ..
၁၁ ရာစုရဲ့ နောက်ခံအခင်းအကျင်းနဲ့ အမှောင်ခေတ်ရဲ့
( The Physician) သမားတော် ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို
စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖော်ကြူထားတဲ့ ကားပါ..
မကြည့်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အကြိုက်တွေ့မယ်
မျှော်လင့်ပါတယ်...။ ဇာတ်ကားထဲမှာ မင်းသားရဲ့ ဆရာပြောတဲ့
" ဘယ်နေရာ မှ မိန်းမချောလေးတွေနဲ့ လူအုပ်ကိုကြည့်ရတာလောက်
ကျနော်မပျော်ရွှင်ပါဘူး" ဆိုတာ ကိုတော့
ကျနော့် သူငယ်ချင်းတွေ အငြင်းပွါးစရာရှိမယ်မထင်ပါတယ်..နှစ်သက်ကြမယ် မျော်လင့်ပါတယ်...
4:07:00 AM 2014, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
Copyright ညှိလို့ ထက်တင်တာ ထက်ဖျက်တယ်
Firedrive မှာ ၃ကြိမ်တင်တာ ၃ ကြိမ်လုံးဖျက်ချခံရပါတယ်..
အခု pCloud ကနေ ထက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
တင်ပေးထားပါတယ် မကြည့်ရသေးရင် ဒီမှာ ကြည့်ပါ..
pCloud မှာ တင်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို ဖုန်းနဲ့ ဒေါင်းချင်ရင်
တိုက်ရိုက်ကြည့်ချင်ရင် အောက်က ပုံလေးတွေမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ
.အောက်က လင့်ကို ကလစ်ပြီးကြည့်ရှုဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်.
ကွန်ပျူတာသမားတွေကတော့ အထွေအထူးရှင်းပြစရာ မလိုဘူးထင်ပါတယ်..
အလွယ်ကူဆုံး ဒေါင်းချင်ရင်တော့ စက်ထဲ IDM ထည့်ထားပေါ့..
4:05:00 AM 2014, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
တောင်းဆိုတဲ့သူ များလွန်းလို့ admin K.M.A ကမြန်မာဘာသာပြန်ပေးလို့
ဖုန်းသမားတွေလည်း ဒေါင်းလို့ အဆင်ပြေအောင် ဖိုင်ဆိုဒ် ၂ မျိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
၂ ခုလုံး လုံးဝ အကြည့်ချည်းပါပဲ..ဆိုဒ်ကြီးက ပိုပြီးရုပ်ထွက်လှတာပေါ့နော့..
ကိုယ် Internet အခြေအနေအလိုက် ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်အောင်
Download 1009 MB
3:52:00 AM မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
တောင်းဆိုထားကြတဲ့ Comedy | Family အမျိုးအစား ဇာတ်ကားဟောင်းလေးပါ..
Lollipop Wallpaper အလန်းလေး Moonshine - Icon Pack v+1.9 Apk
6:20:00 AM Android No comments
Moonshine - Icon Pack v+1.9 Apk
ဒီနေ့တော့ Android user တွေအတွက် Wallpaper လေးကို
လက်ဆောင်အဖြစ် အားလုံးအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Samsung ကုမဏီမှာ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အဖြစ်
တစ်ဟုတ်ထိုးနာမည်ကြီးနေတဲ့ Android Version Lollipop
မိမိဖုန်းလေးထဲမှ ပုံပျက်ပန်းပျက်နဲ့ စတိုင်ဆိုတာလည်းမရှိ
စမတ်ဆိုတာလည်း မမြင်ရတဲ့ ဖုန်းရဲ့ Wallpaper အစုတ်ကြီးကို
Evolution လုပ်ပြီး ကဲ Material Design ကိုအခြေခံရေးဆွဲထားတဲ့
Lollipop ရဲ့ Wallpaper လေးနဲ့ ရွက်လွှင့်ကြည့်လိုက်ပါဦး
ဒီ Wallpaper လေးဟာ သင့်ဖုန်းရဲ့ Screen Resolution ပမာဏကို
192x192 XXX-HDPI ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသင့်အပြင်
750+ vector designed icons အဖြစ် စပါယ်ရေးဆွဲထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုတလောလူကြို က်များနေတဲ့ Nova, Apex, ADW, Smart, Unicon,
Action Launcher, Aviate, Go Launcher, Next, and Holo launcher
တို့ကိုလည်း အထောက်အပံ့ပေးထားသည့်အတွက် Wallpaper အတွက်
အကောင်းဆုံးနဲ့ အလန်းဆုံးဆိုတာကို သင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ ဒေါင်းလော့လင့်များမှ Apk လေးကို
အရင်ဒေါင်းလော့ရယူလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းမှာ အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ။
၂။ အင်စတောလုပ်ပြီးတဲ့အခါ Apk လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
၃။ Apk လေးပွင့်လာတဲ့အခါ "Apply Theme" ဆိုတာကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
၄။ မိမိအသုံးပြု လိုတဲ့ launcher သို့မဟုတ် Wallpaper လေးကို တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါ။
၅။ အားလုံးစိတ်ကြို က်ဖြစ်ရင်တော့ Set as Wallpaper ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
14.4 MB ပဲရှိပါတယ်။
4.0.3 အထက် ဖုန်းအားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
6:19:00 AM Android No comments
Android 4.0.3 - 5.0 အထက် ဖုန်းအားလုံးမှာ
2:39:00 AM 2014, movies, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
Brad Pitt ရဲ့ လူပြောအတော်များနေတဲ့ Action | Drama | War ဇာတ်ကားသစ်ပါ..
စစ်မြေပြင် ကိုရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ တင်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။
စစ်ရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ် ဆိုးကျိုးတွေအတွင်းက
စရိုက်မျိုးစုံ နယ်ပယ်မျိုးစုံက လူသားတွေဟာ
စစ်သားတွေအဖြစ် စစ်မြေပြင်မှာ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအဖြစ်လာစုံကြရတယ်..
အဒီအထဲမှာ စစ်သားတစုဟာ Fury ဆိုတဲ့ တင့်ကားကို
အိမ်အဖြစ်လုပ်ပြီး ရန်သူကို အဆုံးသတ်အထိ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်
သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဖော်ကြူးထားတဲ့ စစ်အတွင်းပန်းချီကားတချက်ဆိုရင် မမှားပါ..
ကျနော်တို့ ဘာတွေ ခံစားရမလဲ ဆိုတာကတော့
ဒီ ဇာတ်ကားကိုတော့ ကျနော်ရဲ့ Admin K.M.A ဘာသာပြန်ပေးထားတာပါ..
2:38:00 AM မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
အဟောင်းဆိုပေမယ့် ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် မရိုးနိုင်အောင်ကောင်းလွန်းလို့
iOS Device များကို Jailbreak မလုပ်မှီ ဖုန်းထဲမှ Data ဖိုင်များကို အလွယ်တကူ Backup လုပ်ပြီး သိမ်းဆည်းထားနည်း
2:20:00 AM Tutorial, နည်းပညာ No comments
iDevice တွေအတွက် မသိမိဖြစ်တဲ့ နည်းပညာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
iOS Device တစ်ခုကို သေသေချာချာလေးလုပ်တတ်သွားပြီဆိုရင်တော့
ကျန်တဲ့ Device အားလုံးလည်း ထို့အတူပဲဆိုတာကို သတိထားစေချင်ပါတယ်။
iDevice ကို Jailbreaking မလုပ်ခင် မိမိဖုန်း/tablet တို့မှာရှိတဲ့
အရေးကြီးတဲ့ Data တွေကို သိမ်းထားနည်းကိုတော့ iDevice ကို
ချစ်မြတ်နိုင်းသူတိုင်း လုံးဝသိထားရမယ့် အပိုင်းဖြစ်ပါတ။
Jailbreak လုပ်လိုက်တာနဲ့ Data တွေပျောက်ဆုံးပျက်စီးခဲ့မယ်ဆိုရင်
ပြီးတော့ Backup လုပ်ထားတာမျိုးလည်း မရှိဘူးဆိုရင်တော့
မိမိမှ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ Data တွေကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့က
တော်တော် မလွယ်တော့တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။
Android Device က မိမိဖုန်း/Tablet တွေကို အလွယ်တကူ
Backup & Restore လုပ်ရန် လွယ်ကူပေမယ့် ဒီ iDevice တွေ
အတွက်တော့ အလေ့အထမရှိတဲ့သူတွေနဲ့ လေ့လာခါစ ကိုင်ခါစ
ညီကိုတွေအတွက် တော့ လုံးဝအခက်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
အခုကျနော် ရှင်းပြသွားမှာ iTunes ဆော့ဝဲကိုအသုံးပြု ပြီး
သိမ်းဆည်းထားနည်းကိုရော့ iCloud ကို အကောက်ကို အသုံးပြု ပြီး
ဖုန်း/Tablet တွေမှာတင် Backup လုပ်နည်း များကိုလည်း
iTunes ဆော့ဝဲကို အသုံးပြု ပြီး Data များကို Backup လုပ်ပြီး
၁။ ပထမဆုံး iTunes ဆော့ဝဲ နောက်ဆုံးထွက်လေးကို
အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းလော့ရယူနိုင်သလို၊ iTunes ဆော့ဝဲကို
မိမိကွန်ပျူ တာရဲ့ OS Device နဲ့ကိုက်ညီမယ့် 32/64 Bit တွေကို
ကွန်ပျူ တာမှာ အလွယ်တကူ အင်စတောလုပ်နည်းကိုလည်း
iTunes ဗားရှင်းအားလုံး ကွန်ပျူ တာမှာ အလွယ်တကူ အင်စတောလုပ်နည်း
၂။ မိမိကွန်ပျူ တာမှာ iTunes ဆော့ဝဲကို အောင်မြင်စွာ
အင်စတောလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်း/Tablet ကို
ကွန်ပျူ တာနဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။
၃။ ပြီးရင် iTunes ဆော့ဝဲကို ဖွင့်လိုက်ပါ
၄။ ကွန်ပျူ တာမှာ iTunes ဆော့ဝဲနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ အခါ
အဲဒီမှာ iTunes ဆော့ဝဲရဲ့အထက်
sidebar မှာ မိမိဖုန်းနာမည်နဲ့ ဖေါ်ပြနေပါလိမ့်မယ်။
Right Click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါ။
၆။ အောက်ကပုံအတိုင်းပေးလာခဲ့ရင်တော့ Backup Now
၇။ Backup လုပ်ပြီးတာနဲ့ Backup process ပြီးအောင်ထိ
စောင့်နေပေးလိုက်ပါ၊ ပြီးရင်တော့ မိမိကွန်ပျူ တာရဲ့ Documents ထဲကို
သွားကြည့်လိုက်ပါ မိမိ ဖုန်း/Tablet များကို အောင်မြင်စွာနဲ့
Backup လုပ်ပြီး သိမ်းဆည်းထားခြင်း ကိစ္စပြီးဆုံးပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ Official ရဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်း ရှင်းပြပေးသွားမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ
အထက် File> Devices > Back up ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
၅။ Backup လုပ်ပြီးတာနဲ့ Backup process ပြီးအောင်ထိစောင့်နေပေးလိုက်ပါ၊
ပြီးရင် iTunes ဆော့ဝဲကို ဖွင့်ပါ၊ Preferences ဆိုတာကိုထပ်နှိပ်ပါ။
iPhone/iPad/တွေရဲ့ နာမည်နဲ့ မိမိBackup လုပ်ထားတဲ့ အချိန်အတိအကျနဲ့
နေ့တွေပါ အသေအချာ မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
iCloud အကောက်ကိုအသုံးပြု ပြီး Data များကို Backup လုပ်ပြီး
၁။ iCloud အကောက်ကို အသုံးပြု ပြီး Backup လုပ်မှာဖြစ်လို့
သင့်မှာ iCloud အကောက်တစ်ခုရှိနေရပါမယ်။
iCloud အကောက်သာရှိနေခဲ့ရင်တော့ automatic
%100% လောက် Backup လုပ်ရတာ လွယ်ကူပါတယ်။
၂။ Settings > iCloud > Backup
တကယ် သင့်ဖုန်းက iOS7Device သာဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့
Settings > iCloud > Storage & Backup ဆိုတာကို
၃။ တကယ်လို့ သင့်ဖုန်းမှာ iCloud Backup ဆိုတဲ့
နေရာမှာ Turn on လုပ်လို့မရှိသေးရင်တော့Turn on လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
၄။ ပြီးရင် Backup Now ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
၅။ ဘာမှ ထပ်လုပ်ပေးစာမလိုပဲ သူ့အလိုလို Data
တွေအားလုံးကို Backup လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။
၆။ အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ သင့်ဖုန်း/Tablet တွေမှာ
iCloud အကောက်ကိုအသုံးပြု ပြီး Backup လုပ်ခြင်း
ဒီ iDevice ဆိုင်ရာ Data များအားလုံးကို
iTunes ဆော့ဝဲနဲ့ iCloud အကောက်တွေကို
အသုံးပြု ပြီး Restore အလွယ်တကူ လုပ်ယူနည်းများကိုတော့
12:21:00 AM movies, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
အရင်တခါက 22 Jump Street ( 2014 )ကိုလဲတင်ပေးထားဖူးပါတယ်
မကြည့်ရသေးရင် ဒီမှာ ပြန်ကြည့်နိူင်ပါတယ်
12:14:00 AM 2014, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
Drama , Thriller, Horror အမျိုးအစား ဇာတ်ကားလေးပါ..
ထိုင်းသရဲ ကားတွေ ကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ
12:10:00 AM movies, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
12:01:00 AM 2014, movies, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
IMDb မှာ Ratings: 8.2 အထိ ရထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ..
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဗြိတိသျှတွေဟာ ဂျာမန်တွေရဲ့ enigma ဆိုတဲ့
Decryption method ကို crack ဖို့ကြိုးစားပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် enigma code ဘယ်နိုင်ငံကမှ မဖော်ထုတ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်နေတယ်..
enigma code ပို့ပေးတဲ့ ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုကို ဖမ်းနိုင်ပေမယ့်။
အဲဒီ message တွေက encode လုပ်ထားပါတယ်။
enigma message တွေမှာ ဂျာမန်တွေရဲ့ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုလုံးရဲ့
အဲဒီ code ကိုသာ crack နိုင်ရင် ဂျာမန်တွေဘာလုပ်မယ်ဆိုကို
ကြိုသိနိုင်တာမို့ ဒါကို မရမက crack နိုင်ဖို့ တနိုင်ငံလုံးက
အတော်ဆုံး cryptographer တွေကိုစုခိုင်းပြီး crack ဖို့ လုပ်ပါတယ်.. ။
ပိုမိုက်တာက အင်္ဂလိပ်စကား စစ်စစ်တွေ ပြောကြတာမို့
ဒီနေ့ခေတ် ယန်ကီး(စ်) စကားတွေ နာရည်ဝနေတော့ တမျိုးဖြစ်နေတာပါပဲ..
pCloud ကနေဖိုင်ဆိုဒ် အကြီး အသေး ၂ မျိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..
11:46:00 PM Supernatural Season 10 complete 15 comments
Supernatural Season 10 ရဲ့ တင်ပြီးသလောက်ကို
11:28:00 PM complete season, Supernatural Season9complete2comments
Supernatural Season9ရဲ့ (၂၃ )ပိုင်းကို